तपाइले सोचेको काम एक हप्ता भित्रमा बन्नेछ हलेसी महादेवको दर्शन गरि ॐ लेखि सेयर गरौं ! एक क्लिक गरिहेरौ
June 29, 2021 khabarmazzakoLeaveaComment on तपाइले सोचेको काम एक हप्ता भित्रमा बन्नेछ हलेसी महादेवको दर्शन गरि ॐ लेखि सेयर गरौं ! एक क्लिक गरिहेरौ
परापुरब का’ल देखी अहिले सम्म शिव’लि’ङ्ग’ला’ई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं ग’लाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन ।
नायिका स्वस्तिमा खड्काले किनिन् नयाँ कार, कडा परिश्रम गरेर किनेको भन्दै मख्ख !
पल शाहलाई ७ केजीको माला लगाएर गरियो ‘रियल हिरो’को सम्मान…(भिडियो)
जेनी कुवरले लेखेको यस्तो ‘नोट’ भेटियो छिटो हेर्नुस
July 9, 2021 khabarmazzako
म एक २७ बर्षिया महिला मेरो श्रीमानको ‘स’म्प’र्क’ शक्ति कम छ, के गर्ने होला सलाहा दिनुसत ?
June 29, 2021 khabarmazzako
बुबाछोरी,बर्षामासको बेला घर-घरमा गएर सर्पबाट हुने जोखिमबाट ज्यान बचाउँँदै ( भिडियो सहित )
June 30, 2021 khabarmazzako